Mediam-bahoaka · Febroary, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Mediam-bahoaka · Febroary, 2019
Tantara mikasika ny Mediam-bahoaka tamin'ny Febroary, 2019
Japana: Nankaiza daholo ny dibera?
Azia Atsinanana 28 Febroary 2019
Nankaiza ny dibera ? – hoy ireo Japone mpanjifa mitaraina rehefa avy nikaroka hatraiza hatraiza ilay vokatra avy amin’ny ronono. Niteraka tsy fahampiana goavan’ny dibera tao Japana ny fitotonganan’ny famokarana ronono velona, izay vao mainka nohasarotin’ny fiakaran’ny vidin'ny voa sy ny fiovan’ny rafitra eran-tany amin’ny fanjifàna vokatra avy amin’ny ronono.
Venezoela: Adihevitra Momba Ilay Rafi-pampianarana Vaovao
Amerika Latina 28 Febroary 2019
Niteraka adihevitra lehibe teo amin'ny firenena ny tolokevitra vaovaon'ny governemanta Venezoeliana momba ny rafi-pampianarana ho an'ny sekoly fanabeazana fototra. Manome ny fomba fijeriny izany ireo bilaogera.
Mahavariana ireo mpandinika sy ny mpakafy ny vorona ny Spiny Babbler, ilay vorona tsy hita afa-tsy ao Nepal
Azia Atsimo 28 Febroary 2019
Nahaliana ireo mpandinika vorona sy ireo mpankafy vorona manerana izao tontolo izao ny Spiny Babbler, izay tsy hita afa-tsy any Nepal. Tandindonin-doza ilay vorona noho ny fanalana ny kirihitr'ala hanaovana fambolena sy ny fanitarana ny faritra an-tanàndehibe.
Syria: Avotsory i Razan Ghazzawi
Syria 28 Febroary 2019
Nosamborin'ny manampahefana Syriana androany i Razan Ghazzawi, bilaogera ao amin'ny sisintany Syriana sy Jordaniana. Niteraka tsikera sy fahatezerana teo amin'ireo bilaogera sy mpikatroka manerantany, izay nitaky ny famotsorana azy tsy misy hatak'andro ny fisamborana a'ni Razan.
Malezia: Vaovao tsara miampy sira kely
Malezia 28 Febroary 2019
Raha manana tanjona amin'ny fandrisihana ny vahoaka hampiasa ny aterineto ho fitaovana fampielezana vaovao ny governemanta Maleziana dia namerina ny fidirana amin'ny vavahadim-baovao Malaysia Today sy ireo tranonkala hafa izay nosakanana nanomboka tamin'ny volana Janoary 2008.
Iran: Niakatra fitsarana ilay bilaogera tanora indrindra nogadraina
Iràna 28 Febroary 2019
Tsy voalohany manerantany ihany ny governemanta Iraniana amin'ny fanenjehana ireo bilaogera, fa nametraka zava-bita lehibe indrindra maromaro ihany koa izy ireo: manomboka amin'ilay bilaogera nogadraina voalohany teo amin'ny tantara, hatramin'ny bilaogera voalohany maty tany am-ponja.